Kumele Wenze Izenzo Ezinhle Ezanele Ukulungiselela Isiphetho Sakho | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Isihe Sami sivezwa kulabo abangithandayo futhi bazidele bona. Futhi isijeziso esilethwa phezu kwababi kungubufakazi kanye besimo Sami esilungile Kanye, ikakhulukazi, nobufakazi bentukuthelo Yami. Uma inhlekelele ifika, indlala kanye nesifo esibhubhisayo siyokwehlela bonke labo abaphikisana Nami futhi bayokhala. Labo abenze zonke izinhlobonhlobo zobubi, kodwa asebengilandele iminyaka eminingi, ngeke bangabi nacala; nabo futhi, bayokwehlela enhlekeleleni efana nayo engakaze ibonakale ezinkathini zonke, futhi futhi bayohlala esimweni esingapheli sokwethuka novalo. Futhi labo abalandeli Bami abakade bethembekile Kimi ngedwabayojabula futhi bababaze amandla Ami. Bayokuzwa ukweneliseka okungachazeki ngaphakathi futhi baphile ngenjabulo engingakaze ngiyiphe isintu. Ngokuba ziyigugu Kimi izenzo zabantu ezinhle kepha ngiyazinyanya izenzo zabo zobubi. Selokhu ngaqala ukuhola isintu, bengilokhu ngethemba ukuthi kuzoba neqembu labantu elinomqondo ofana noWami. angikaze ngibakhohlwe labo abangenawo umqondo ofanayo noWami; yilokhu ngibenyanya enhliziyweni Yami, ngilinde kuphela ithuba lokuletha impindiselo Yami kubona, okuyonginika injabulo ukuyibona. Usuku Lwami seluze lwafika namuhla, futhi angisadingi ukulinda!
Ababi Kumele Bajeziswe Ingabe Wethembeke Kubani? Ngabe Umsebenzi kaNkulunkulu Ulula Njengoba Umuntu Ecabanga? Umsindisi Usebuyile “Esefwini Elimhlophe”